सुशीलको शान्त महाप्रस्थान
पूर्वप्रधान मन्त्री तथा नेपाली कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाको मंगलबार मध्यरातमा एउटा शान्त सन्यासीको जस्तो देहत्याग भयो । नेपालको इतिहासमा मूलधारको राजनीति गरेका तथा उच्च पदमा पुगेका कसैको पनि यति शान्त मृत्यु देख्न पाइएको छैन।
जीवनको अन्तिम स्वास लिँदै गर्दा न त उनका वरिपरि चिकित्सकहरू नै थिए न त शुभेच्छुक वा पार्टी कार्यकर्ताको भीड नै ! यतिसम्म कि सञ्चारमाध्यमले पनि उनको निधनको समाचार घन्टौँपछि पाए । सादा जीवनशैलीका अनुयायी सुशीलको महाप्रस्थान पनि अत्यन्त 'सादा' हुन पुगेको छ । उनको जीवनशैली, निष्ठा, अडान र त्यागको स्मरण नेपाली राजनीतिमा अनन्तकालसम्म हुने विश्वास गर्न सकिन्छ ।
नेपाली समाजमा सनातनदेखि नै एउटा अनुकरणीय परम्परा कायम छ । मान्छे जतिसुकै खराब भए पनि मृत्युपश्चात् उसका गुणमात्रै सम्झने । तर, सुशीलका हकमा त्यो किञ्चित लागु हुँदैन । उनले आफूसम्बद्ध दल नेपाली कांग्रेसमात्र होइन आमजनताका लागि अविस्मरणीय गुन लगाएका छन् । नेपाली जनता दशकौँदेखि आफूद्वारा चुनिएका प्रतिनिधिमार्फत् संविधान लेखियोस् भन्ने चाहन्थे । त्यस्तो संविधानले आफूमाथि शासन गरोस् भन्ने जनचाहना उनै सुशीलका समयमा साकार भएको छ । उनी प्रधान मन्त्री छँदा गत असोज ३ गते अनेक व्यवधानका बीच नेपालले नयाँ संविधान पाएको हो । देशले उनको अभिभाकत्व नपाएको भए संविधान जारी हुन गाह्रो थियो । यद्यपि, उक्त संविधान जारी भएपछि मुलुकका केही स्थानमा राजनीतिका नाममा अनेक वितण्डा मच्चिएका छन्, तर त्यही संविधानमा टेकेर यो देश र देशबासिको उन्नति गर्न सकिने प्रशस्त सम्भावना छन् । देशले लामो समयदेखि प्रतीक्षा गरेको संविधान पाउनु चानचुने कुरा होइन, त्यस्तो ऐतिहासिक काम गर्न सुशील सफल भएका छन् । भ्रष्टाचारका कारण मुलुकको अवस्था जर्जर बनेको छ, उनको पार्टी कांग्रेसभित्रै भ्रष्टाचार मौलाएको आरोप बेखाबखत लागिरहन्छ । तर, सुशीलले अनियमितता गर्ने जोकोहीलाई आफ्नो नजिक पर्नै दिएनन्, 'भ्रष्टाचार' शब्द उनले कहिल्यै सुन्न चाहेनन् । मन्त्रिपरिषद्ले ५ हजार रुपैयाँभन्दा माथिको रकम खर्च गरेको हरहिसाब वेबसाइटमा राख्नुपर्ने नियम उनैले बसाए । उनले बसाएको यो थितिलाई निरन्तरता दिन सक्दामात्रै पनि अनियमितता यतिविधि मौलाउन पाउँदैनथ्यो ।
पहिलो संविधान सभा निर्वाचन (२०६४)मा दोस्रो स्थानमा खुम्चिएको नेपाली कांग्रेसले दोस्रो संविधान सभामा पहिलो बन्ने अवसर पायो । यसको श्रेय पनि पार्टी सभापति भएका कारण उनै सुशीललाई जान्छ। आफूलाई मात्र लोकतान्त्रिक पार्टी ठान्ने कांग्रेसको आन्तरिक लोकतन्त्र भने कमजोर हुँदै गएको सर्वत्र महसुस गरिएको हो । पार्टी विधान नै संशोधन गरेर पदासीन भइरहने प्रवृत्ति कांग्रेसमा बलियो भएको थियो । तर, सुशीलले त्यो परम्परा भत्काउँदै पार्टीलाई विधि–विधानअनुरूप चलाउने भरमग्दुर प्रयत्न गरिरहे । देशले नयाँ संविधान पाएपछि प्रधान मन्त्रीको कुर्सीमा नबस्ने आफ्नो पूर्वघोषणालाई उनले मूर्तरूप दिए । त्यसपछि नै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधान मन्त्री बन्ने बाटो खुलेको हो । उनी कहिल्यै पदलोलुप भएनन् । गिरिजाप्रसाद कोइराला पार्टी सभापति तथा पटक पटक देशको प्रधान मन्त्री हुँदा महŒवपूर्ण मन्त्रालय सम्हाल्न भनिएको थियो । तर, उनले आफू पार्टीलाई मजबुत पार्नतिर लाग्नुपर्ने भन्दै पदमा जाँदै गएनन् । पदमा पुग्न जस्तोसुकै सम्झौता गर्ने र आफ्नो व्यक्तित्व नै लिलाम गर्नसमेत पछि नपर्ने नेपाली राजनीतिक दुनियाँमा सुशीलको त्यागलाई अविश्मरणीय मान्नुपर्छ ।
कांग्रेस यतिखेर १३आँै महाधिवेशनको संघारमा छ । सुशीललगायतका अन्य केही नेता सभापतिका प्रत्यासी रहेको अड्कलबाजी र प्रचारबाजी चलिरहेका समयमा उनको निधन भएको छ । देशको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक पार्टी भएका कारण कांग्रेसका क्रियाकलापबारे आमजनता सधैँ चनाखो रहँदै आएका छन् । साँच्चै कांग्रेसले आफूलाई जनप्रिय पार्टी बनाउने हो भने यो महाधिवेशनमार्फत् जनताको जीविकाबारे बहस चलाउनुपर्छ । अब अति भो राजनीतिका नाममा जनताले पाएको दुःख ! यसको अन्त्य जरुरी छ । यसका निम्ति पनि कांग्रेस पार्टी नेतृत्व कम्तीमा सुशीलजस्तै निष्ठावान, सदाचारी र समर्पणभाव भएका नेताका हातमा जानुपर्छ । यति गर्न सक्दा सुशील कोइरालामाथि सच्चा श्रद्धाञ्जली हुनेछ । निष्ठावान् र सादा जीवनशैलीका शीर्ष नेता सुशीलप्रति हाम्रो हार्दिक श्रद्धाञ्जली ।